January 30, 2021 444
हिन्दू धर्ममा विवाहको समयमा दुलाह र दुलहीको कुण्डली हेर्ने र मिलाउने परम्परा रहेको छ। यद्यपि धेरै मानिसहरूले कुण्डलीसँग सम्बन्धित परम्पराको पालना गर्दैनन्, विशेष गरी प्रेम विवाहमा। कुण्डलीको ज्योतिष शास्त्रमा विशेष महत्त्व छ। कुण्डलीबाट व्यक्तिको थुप्रै गुणका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। यस्तोमा केहि राशिका मानिसको कुण्डलीमा प्रेम विवाहको योग धेरै हुन्छ।
जान्नुहोस् यी राशिको बारेमा….
मेष राशिका मानिस धेरै भावनात्मक हुन्छन् र उनीहरु आफूले माया गर्ने मानिसमा पूर्ण विश्वास गर्छन्। यी व्यक्तिहरू आफ्नो हरेक सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छन् र यसलाई कायम राख्न धेरै मेहनत गर्दछन्। मेष राशिको मानिस धेरै जसो आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीसँग वा आफ्नै समूह भित्रको मानिससँग प्रेममा पर्छन् र त्यहि व्यक्तिसँग विवाह गर्छन्।
यी व्यक्ति धेरै दृढ र मेहनती हुन्छन्। यी व्यक्तिहरूलाई निकै थोरै चीजहरू मात्र मनपर्छ। स्वभावैले यी व्यक्तिहरू धेरै जिद्दी किसिमका हुन्छन्। यी व्यक्तिहरू आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न मन पराउँछन्। यी मानिस आफूले माया गरेको मानिसको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। यी मानिस प्राय: प्रेम विवाह नै गर्ने गर्छन्।
आफ्नो मजाकी र सामाजिक स्वभावद्वारा यी मानिस आफूप्रति धेरै मानिसलाई आकर्षित गर्न सफल हुन्छन्। मिथुन राशिका मानिस आफ्नो काम र साथीको बारेमा गम्भीर नभएता पनि आफ्नो जीवनसाथी भने आफैं रोज्छन्। यी मानिस पनि प्रेम विवाहमा विश्वास गर्छन्।
यस राशिका व्यक्ति धेरै व्यवस्थित हुन्छन् र आफूले सोचे अनुसार नै जीवन बिताउँछन्। धनु राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छामा विवाह गर्छन्। यी मानिसले जस्तो सुकै समस्यामा पनि आफ्नो प्रेमीको साथ छाड्दैनन्।
मकर राशिका मानिस आफूले माया गरेको मानिसको साथ कुनै पनि हालतमा छोड्दैनन्। यी व्यक्तिहरू आफ्नो छनौटको साथ धेरै सम्झौता गर्दैनन् र यसकारण ती व्यक्तिहरू प्रायः प्रेम विवाह गर्छन्।
Prevतपाईका दुई हत्केला जोड्दा आधा चन्द्रमा बन्छ ? उसोभए तपाई भाग्यमानी हुनुहुन्छ
Nextस्तन क्यान्सरका यी लक्षणहरु जुन कुरामा महिलाले खासै ध्यान दिएका हुँदैनन्
“के तपाईलाई थाहा छ?अब केहि वर्ष भित्रनै सकिँदैछ पृथ्वीको सारा सुन, पुरा खबर पढनुस”